हिमालय खबर | 'नक्कली फोन विश्वास गर्दा अमेरिकामा म ठगिए, म फँसे'
कृष्ण भण्डारी ,
प्रकाशित १३ आश्विन २०७४, शुक्रबार | 2017-09-29 03:03:10
उताबाट बोल्ने मान्छेले मेरो नाम भन्यो। उसले मलाई आफू पहिले बसेको राज्य जर्जियाबाट टेक्सस सरिसक्दा पनि ठेगाना फेरिएको विषयमा किन जानकारी नदिएको भन्दै जिज्ञासा राख्यो । मैले आफू विश्वविद्यालयको विद्यार्थी र रिसर्चमा काम गर्ने भएकोले विश्वविद्यालयलाई जानकारी दिइसकेको बताए ।
‘ल तिमीसँग तिम्री श्रीमती पनि रहिछन्, उनको पनि व्याकग्राउण्ड चेक गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अर्को चारहजार डलर चाहिन्छ, तुरुन्तै पठाउ,’ उसले भन्यो । मैले सोचे–‘मेरो व्याकग्राउण्ड चेकमा कुनै समस्या छैन । किनकी म विद्यार्थी (आइ ट्वेन्टी भिसा) मा थिए । मेरी पत्नीसँग पनि अाइ ट्वेन्टी र टिपिएस पनि छ । के समस्या छ र ?’ मैले फेरि श्रीमतीलाई समेत थाहै नदिई आइट्युन कार्ड किनेर उसलाई नम्बर दिएँ । उसले पत्नी पनि पास भएको बतायो ।
म अहिले बुझ्दैछु । म नमज्जाले उनीहरुको मुर्गा बन्दै र पासोमा फँस्दै गएको रहेछु । छोराको १२ हजार सहित २० हजार डलर उनीहरुको हातमा परेपछि मेरो र श्रीमती व्याकग्राउण्ड चेकमा पास भएको बतायो । उनीहरूले थपमा अब नेपालको व्याकग्राउण्ड पनि चेक गर्नुपर्छ भने । ‘तिम्रो नेपालको व्याकग्राउण्ड पनि चेक गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा थप १० हजार डलर तुरन्तै जम्मा गर्नुपर्छ तिमीले,’ उसले भन्यो । मलाई त्यसरी फोन गर्ने भारतीय वा अन्य मुलुकका आप्रवासी जस्तो लागेन । किनकी मेरो नाम उच्चारण गर्दा उनीहरुलाई निकै अप्ठेरो परेको थियो । अमेरिकी जस्तै लाग्यो ।
मैले फेरि दुई दिन लगाएर १० हजार जम्मा गरे । कतिसम्म भने नेपालमा मेरो परिवारसँग जग्गा लेनदेन संबन्धि विवाद रहेको र त्यो पनि बुझ्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले रकम मागे । मैले यस्तो विवाद हाम्रो हुँदै नभएको बताउँदा वकिल भनिने एकजना मसँग फोनमै असाध्यै रिसायो ।
पटक पटक मैले आइट्युन कार्ड, बैंकमा जम्मा गरेर ५७ हजार डलर उनीहरुलाई बुझाएछु । मसँग रहेको भनेको चारहजार डलरमात्र हो । बाँकी सबै क्रेडिट कार्ड, साथीहरुसँग ऋण लिएर उक्त रकम तिरेको हुँ । यतिको रकम तिरिसकेपछि म अन्यौलमा परेँ ।
मैले पछिल्लो दुई पटक बैंक खातामा बुझाएको १६ हजार पाँचसय डलरलाई ट्रयाक गरेर युएस सिक्रेट सर्भिसले अनुसन्धान थालेको छ । मलाई झिनो आशा छ त्यसबाट मलाई ठग्नेहरुको केही पत्ता लाग्छ कि ? म ठगिनुको कारण हो–सेभ गरेकै नम्बरबाट फोन आउनु । अनि युएससिआइएसको वेवसाइटमा गएर हेर्दा पनि त्यहाँ फोन आएकै नम्बर थियो । उनीहरुले मेरो सबै विवरण गरेपछि कसरी विश्वास नगर्नु मैले ? म डुबे । विद्यार्थी मान्छे । मैले कहिले ५७ हजार कमाएर साथीहरु, क्रेडिटकार्डको तिरिसक्नु ?
(भण्डारीसँग रामचन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीमा अाधारित । भण्डारीले अाफूमाथि यस्तो घटना भएको दावीका अाधारमा यो लेखिएको हो । यस्तै प्रकृतिका घटनामा अमेरिकामा प्रायः धेरै नेपालीहरूलाइ परिरहेका छन् । जनचेतनाका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ ।)
कृष्ण भण्डारी -